Cabdullaahi Sheekh Xasan oo beeniyey inuu u xiranyahay dowladda Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Cabdullaahi Sheekh Xasan oo beeniyey inuu u xiranyahay dowladda Soomaaliya
Mareeg.com: Wasiirka Ganacasiga iyo Warshadaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, C/llaahi Sheekh Xasan Cali ayaa beeniyey inuu u xiran yahay ciidamada dowladda Federaalka ee Soomaaliya ee Muqdisho.
C/llaahi Sheekh Xasan oo wareysi siiyey mid ka mid ah Idaacadaha Muqdisho ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war laga sii daayey qaar ka mid warbaahinta Afaka Soomaaliga ku hadla oo sheegay in la xiray.
“Waan dhageystay in idaacad sheegtay inaan xabsi ugu jiro dowladda Soomaaliya, waxaan cadeynayaa inaan gurigeyga joogo aanan xirneyn, xaqna kuma xirni, gardarrana kuma xirni” ayuu yiri C/llaahi Sheekh Xasan.
Labo maalmood ka hor, C/llaahi Sheekh Xasan ayaa calanka maamulka uu ka tirsan yahay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka taagay deegaanka Jazeera.
Maamulka gobolka Banaadir oo kaashanaya ciidanka Nabad Sugidda ayaa saacado kadib burburriyey boorka iyo calanka maamulkaas ee laga suray deegaanka Jaziira.
Maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ka dhex qarxay muran ku saabsan halka Jaziira ka tirsan tahay.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa qaba in Jaziira ka tirsan tahay gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed, halka maamulka Banaadir aaminsan yahay in Jaziira ka tirsan tahay Banaadir.
Gobolka Banaadir malagu dari karaa gobol kale? (Dood sharci oo dhalatay)